Nyankopɔn Mmara—Asɛnni Nhyehyɛe a Ɛyɛ Pɛ na Ɔdɔ Wom | Bɛn
‘Yehowa Mmara Yɛ Pɛ’
1, 2. Dɛn nti na nnipa pii mmu mmara, nanso yebetumi ate nka dɛn wɔ Onyankopɔn mmara ho?
“MMARA yɛ amoa donkudonku, . . . ɛmene biribiara.” Saa asɛm no puee nhoma bi a wotintimii wɔ afe 1712 mu tɔnn mu. Nhoma no kyerɛwfo kasa tiaa mmara kwan so nhyehyɛe a ɛtɔ mmere bi a ɛma asɛm bi tumi di mfirihyia pii wɔ asɛnnibea, na ɛma nkurɔfo a wɔpɛ sɛ wodi wɔn asɛm ma wɔn bɔ ka buruburoo no. Wɔ nsase pii so no, mmara ne asɛnni nhyehyɛe yɛ hwanyann ma ntɛnkyea, menasepɔw, ne nsɛm a ɛbɔ abira abu so araa ma mmara abɛyɛ ade a wobu no animtiaa koraa.
2 Nea ɛne no bɔ abira no, susuw nsɛm yi a wɔkyerɛw no bɛyɛ mfirihyia 2,700 a atwam ni no ho hwɛ: “Medɔ wo mmara dɛn ara!” (Dwom 119:97) Dɛn nti na odwontofo no nyaa nkate a emu yɛ den saa? Efisɛ mmara a ɔkamfoe no nyɛ wiase nniso bi de, na mmom Yehowa Nyankopɔn. Bere a woresua Yehowa mmara no, ebia wobɛte nka kɛse sɛ odwontofo no. Adesua a ɛte saa no bɛma woahu nea ɛwɔ ɔtemmufo a ɔsen biara wɔ amansan yi mu no adwene mu.
Mmarahyɛfo Pumpuni No
3, 4. Akwan bɛn so na Yehowa ada no adi sɛ ɔyɛ Mmarahyɛfo?
3 Bible ka kyerɛ yɛn sɛ: “Obiako ne mmarahyɛfo ne temmufo.” (Yakobo 4:12) Nokwarem no, Yehowa nkutoo ne Mmarahyɛfo nokwafo. Ne “wim mmara” na ɛkyerɛ ɔsoro abɔde a ekyinkyin no kwan. (Hiob 38:33, The New Jerusalem Bible) Onyankopɔn mmara na ɛkyerɛ Yehowa abɔfo kronkron ɔpepem pii no kwan, efisɛ wahyehyɛ wɔn ma wɔn mu biara wɔ ne dibea, na wɔsom wɔ Yehowa akwankyerɛ ase sɛ n’asomfo.—Dwom 104:4; Hebrifo 1:7, 14.
4 Yehowa ama adesamma nso mmara. Yɛn mu biara wɔ ahonim, ade a ɛda Yehowa atɛntrenee adi. Sɛ́ mmara bi a ɛwɔ yɛn mu no, ahonim betumi aboa yɛn ma yɛahu nea ɛteɛ ne nea ɛnteɛ. (Romafo 2:14) Ná yɛn awofo a wodi kan no wɔ ahonim a ɛyɛ pɛ, enti na wonhia mmara pii. (Genesis 2:15-17) Nanso, onipa a ɔnyɛ pɛ hia mmara pii a ɛbɛkyerɛ no kwan ma wayɛ Onyankopɔn apɛde. Yehowa Nyankopɔn maa tete agyanom te sɛ Noa, Abraham, ne Yakob mmara, na wɔn nso de saa mmara yi maa wɔn mmusua. (Genesis 6:22; 9:3-6; 18:19; 26:4, 5) Yehowa ankasa bɛyɛɛ Mmarahyɛfo a ne so bi nni hɔ bere a ɔnam Mose so ne Israel man no yɛɛ Mmara apam no. Mmara apam yi ma yenya Yehowa atɛntrenee mu nhumu kɛse.
Mose Mmara No—Emu Nsɛm
5. So na Mose Mmara no yɛ mmara a emu nsɛm dɔɔso na ɛso di yɛ den, na dɛn nti na wubua saa?
5 Ɛte sɛ nea nnipa pii susuw sɛ Mose Mmara no yɛ mmara a ɛdɔɔso na ɛyɛ hwanyann. Adwene a ɛte saa nyɛ nokware koraa. Mmara bɛboro 600 na ɛwɔ mmara nhoma no nyinaa mu. Ɛbɛyɛ sɛ nea ɛdɔɔso, nanso susuw ho hwɛ: Eduu afeha a ɛto so 20 no awiei no, na United States mmara ahyɛ nhoma ahorow a ekura nkratafa 150,000 ma. Mfirihyia abien biara wɔde mmara foforo bɛyɛ 600 ka ho! Enti ɛdefa mmara no dodow ho no, nnipa mmara ma Mose Mmara no yɛ ketewa koraa. Nanso, Onyankopɔn Mmara kyerɛɛ Israelfo no kwan wɔ asetra afã bi a ɛnnɛyi mmara nsusuw ho mpo mu. Susuw emu nsɛm ho hwɛ.
6, 7. (a) Ɔkwan bɛn so na ɛsono Mose Mmara no ne mmara apam foforo biara, na Mmara no mu kɛse ne nea ɛwɔ he? (b) Ɔkwan bɛn so na na Israelfo no betumi ada no adi sɛ wogye Yehowa tumidi tom?
6 Mmara no kamfoo Yehowa tumidi kyerɛe. Enti, sɛ wɔyɛ ntotoho a, Mose Mmara no sen mmara foforo biara. Mmara no mu nea ɛsen biara ne eyi: “Israel, tie, [Yehowa, NW] yɛn Nyankopɔn ne [Yehowa, NW] koro. Na fa wo koma nyinaa ne wo kra nyinaa ne w’ahoɔden nyinaa dɔ [Yehowa, NW] wo Nyankopɔn.” Ɔkwan bɛn so na na Onyankopɔn nkurɔfo bɛdɔ no? Ná wɔbɛsom no, abrɛ wɔn ho ase ahyɛ ne tumidi ase.—Deuteronomium 6:4, 5; 11:13.
7 Israelni biara nam ne ho ase a ɔbrɛ hyɛɛ wɔn a wɔmaa wɔn tumi no ase so na egyee Yehowa tumidi toom. Ná awofo, mmapɔmma, atemmufo, asɔfo, ne bere bi akyi no, ɔhene no, nyinaa gyina hɔ ma Onyankopɔn tumidi. Yehowa buu atua biara a wɔtew tiaa wɔn a wodi tumi no sɛ atua a wɔtew tiaa ɔno ankasa. Nanso, sɛ wɔn a wodi tumi no ne Yehowa nkurɔfo no di nsɛm wɔ ɔkwan a ɛmfata anaa ahantan so a, na ne bo fuw wɔn. (Exodus 20:12; 22:28; Deuteronomium 1:16, 17; 17:8-20; 19:16, 17) Enti na afanu no nyinaa wɔ asɛyɛde sɛ wɔma Onyankopɔn tumidi so.
8. Ɔkwan bɛn so na Mmara no daa Yehowa kronkronyɛ gyinapɛn adi?
8 Mmara no daa Yehowa gyinapɛn kronkron no adi. Nsɛmfua “kronkron” ne “kronkronyɛ” pue bɛboro mpɛn 280 wɔ Mose Mmara no mu. Mmara no boaa Onyankopɔn nkurɔfo ma wohuu ade a ɛho tew ne nea ɛho ntew, bobɔɔ nneɛma ahorow bɛboro 70 a ebetumi ama Israelni bi ho agu fĩ din. Saa mmara yi kaa honam fam ahotew, adidi, ne nwura a wɔtow gu mpo ho asɛm. Mmara a ɛtete saa no ma wonyaa apɔwmuden a ɛyɛ nwonwa. * Nanso, na ekura atirimpɔw a ɛkorɔn—sɛ ɛbɛma nkurɔfo no anya Yehowa anim dom, na ama wɔatwe wɔn ho afi nneyɛe bɔne a aman a atwa wɔn ho ahyia a wɔn bra asɛe yɛe no ho. Susuw nhwɛso bi ho hwɛ.
9, 10. Nna mu nkitahodi ne abawo ho mmara bɛn na na ɛwɔ Mmara apam no mu, na mfaso bɛn na na ɛwɔ mmara a ɛtete saa no so?
9 Mmara apam no mu ahyɛde ahorow kae sɛ nna mu nkitahodi ne abawo—wɔ awarefo mu mpo—maa wɔn ho guu fĩ kosii bere bi. (Leviticus 12:2-4; 15:16-18) Ahyɛde a ɛtete saa no ammu Onyankopɔn akyɛde ahorow a ɛho tew yi animtiaa. (Genesis 1:28; 2:18-25) Mmom no, saa mmara no maa Yehowa kronkronyɛ so, na ɛmaa n’asomfo ho tewee. Ɛsɛ sɛ yɛhyɛ no nsow sɛ aman a na atwa Israel ho ahyia no de ɔbarima ne ɔbea nna ne abawo ho amanne frafraa wɔn som mu. Ná mmarima ne mmea tuutuusi wɔ Kanaanfo som mu. Animguasede a enye koraa fii mu bae na ɛtrɛwee. Nea ɛne no bɔ abira no, Mmara no ma woyii nna ho nsɛm fii Yehowa som mu koraa. * Mfaso afoforo nso fii mu bae.
10 Saa mmara no kyerɛkyerɛɛ nokware a ɛho hia. * Nokwarem no, ɔkwan bɛn na Adam bɔne no nam so fi awo ntoatoaso biako so ka nea edi so no? So ɛnnam nna mu nkitahodi ne abawo so? (Romafo 5:12) Yiw, Onyankopɔn Mmara no kaee ne nkurɔfo no sɛ bɔne yɛ ade a ɛwɔ hɔ bere nyinaa. Nokwarem no, wɔwoo yɛn nyinaa wɔ bɔne mu. (Dwom 51:5) Yehia bɔne fafiri ne ogye sɛnea ɛbɛyɛ a yebetumi abɛn yɛn Nyankopɔn a ɔyɛ kronkron no.
11, 12. (a) Atɛntrenee ho nnyinasosɛm a ɛho hia bɛn na Mmara no kamfo kyerɛe? (b) Nneɛma a na ɛremma wommu atɛnkyea bɛn na na ɛwɔ Mmara no mu?
11 Mmara no daa Yehowa atɛntrenee a ɛyɛ pɛ no adi. Mose Mmara no kamfoo nnyinasosɛm a ɛne sɛ wɔbɛma biribiara ayɛ pɛ, anaasɛ akari pɛ wɔ atemmu mu no kyerɛe. Enti, Mmara no kae sɛ: “Ɔkra nsi ɔkra ananmu, aniwa nsi aniwa ananmu, ɛse nsi ɛse ananmu, nsa nsi nsa ananmu, ɛnan nsi ɛnan ananmu.” (Deuteronomium 19:21) Ɛnde, sɛ obi di nsɛmmɔne a na ɛsɛ sɛ asotwe a wɔde ma no no fata nsɛmmɔne a odii no. Ná Onyankopɔn atɛntrenee yi wɔ Mmara no mu, na ɛde besi nnɛ no, ɛno ho hia na ama yɛate Kristo Yesu agyede afɔre no ase, sɛnea Ti 14 bɛda no adi no.—1 Timoteo 2:5, 6.
12 Ná nneɛma a ɛremma wommu ntɛnkyea nso wɔ Mmara no mu. Sɛ nhwɛso no, anyɛ yiye koraa no, na egye adansefo baanu na ama sobo bi ayɛ nea edi mũ. Ná ntanhunu a obi ka ho asotwe mu yɛ den. (Deuteronomium 19:15, 18, 19) Wɔbaraa ɔporɔw ne adanmude nso denneennen. (Exodus 23:8; Deuteronomium 27:25) Wɔ Onyankopɔn nkurɔfo aguadi mu mpo no, na ɛsɛ sɛ wokura Yehowa atɛntrenee ho gyinapɛn a ɛkorɔn no mu. (Leviticus 19:35, 36; Deuteronomium 23:19, 20) Mmara apam a na ɛkorɔn na ɛteɛ no yɛɛ nhyira maa Israel!
Mmara a Esii Mmɔborohunu ne Atɛntrenee So Dua
13, 14. Ɔkwan bɛn so na Mmara no hyɛɛ atɛntrenee a na wobebu ɔkorɔmfo ne nea owiaa n’ade no ho nkuran?
13 So na Mose Mmara no yɛ mmara katee a na ɛnna mmɔborohunu adi? Ɛnte saa koraa! Wɔde honhom kaa Ɔhene Dawid ma ɔkyerɛwee sɛ: “[Yehowa, NW] mmara yɛ pɛ.” (Dwom 19:7) Sɛnea na onim no yiye no, Mmara no hyɛɛ mmɔborohunu ne atɛntrenee ho nkuran. Ɛyɛɛ dɛn na ɛyɛɛ saa.
14 Wɔ nsase bi so nnɛ no, ɛte sɛ nea mmara no hu nsɛmmɔnedifo mmɔbɔ, na edi boa wɔn sen nkurɔfo a wodi wɔn nsɛmmɔne no. Sɛ nhwɛso no, wotumi de akorɔmfo gu afiase. Bere a ebetumi aba sɛ nkurɔfo a wowiaa wɔn no nsa nkaa wɔn nneɛma no, ɛsɛ sɛ wotua tow ma wɔde hwɛ nsɛmmɔnedifo a wɔte saa no ma wɔn baabi da ne biribi di. Wɔ tete Israel no, na afiase nni hɔ sɛnea ɛwɔ hɔ nnɛ no. Ná anohyeto a emu yɛ den wɔ asotwe horow a emu yɛ den a wɔde ma ho. (Deuteronomium 25:1-3) Na ɛsɛ sɛ owifo de dekode a owiae no hyɛ onii a owiaa n’ade no ananmu. Afei nso, na ɛsɛ sɛ owifo no tua ka foforo. Ahe? Egu ahorow. Ɛda adi sɛ, wɔmaa atemmufo no nneɛma bi a wobegyina so, biribi te sɛ ɔbɔnefo no ahonu. Ɛno na ɛkyerɛkyerɛ nea enti a mpatade a na wɔhwehwɛ sɛ owifo de ma sɛnea Leviticus 6:1-7 kyerɛ no sua koraa sen nea wɔakyerɛ wɔ Exodus 22:7 no.
15. Ɔkwan bɛn so na Mmara no hwɛ ma wɔdaa mmɔborohunu ne atɛntrenee adi wɔ obi a wanhyɛ da na okum obi asɛm no mu?
15 Mmara no fi mmɔborohunu mu gye toom sɛ ɛnyɛ bɔne nyinaa na wɔhyɛ da yɛ. Sɛ nhwɛso no, sɛ onipa bi anhyɛ da na okum obi, na ɔyɛ ade a ɛfata denam guan a obeguan akɔ guankɔbea nkurow a na apete Israel no biako mu a, na ɛnsɛ sɛ ɔde ɔkra si ɔkra ananmu. Sɛ atemmufo a wɔwɔ kurow no mu hwehwɛ n’asɛm no mu wie a, na ɛsɛ sɛ ɔtra kurow no mu kosi sɛ ɔsɔfopanyin no bewu. Ɛno akyi no, na obetumi atra baabiara a ɔpɛ. Enti onyaa Onyankopɔn mmɔborohunu so mfaso. Bere koro no ara, mmara yi sii sɛnea nnipa nkwa som bo kɛse no so dua.—Numeri 15:30, 31; 35:12-25.
16. Ɔkwan bɛn so na Mmara no bɔɔ hokwan ahorow bi a ankorankoro wɔ ho ban?
16 Mmara no bɔɔ hokwan a ankorankoro wɔ ho ban. Susuw sɛnea ɛbɔɔ wɔn a na wɔde ka ho ban no ho hwɛ. Mmara no kae sɛ ɛnsɛ sɛ wɔhyɛn nea ɔde ka no fie kogye ade a ɔde sii awowa no. Mmom no, ɛsɛ sɛ nea wɔde no ka no gyina abɔnten na ɔma nea ɔde ka no de awowaside no brɛ no. Saayɛ so no, wɔnhyɛn onipa no fie ɔhyɛ so. Sɛ nea wɔde no ka no gye nea ɔde ka no ntama sɛ awowaside a, na ɛsɛ sɛ ɔsan de kɔma no bere a ade asa no, efisɛ ɛda adi sɛ nea ɔde ka no behia de akata ne ho anadwo.—Deuteronomium 24:10-14.
17, 18. Ɛdefa akodi ho no, ɔkwan bɛn so na na Israelfo no yɛ soronko wɔ aman foforo ho, na dɛn ntia?
17 Wɔ Mmara no ase no, na mmara wɔ akodi mpo ho. Na ɛnsɛ sɛ tumi anaa nkonim kɛkɛ a Onyankopɔn nkurɔfo bedi nti na wɔkɔ ko, mmom na ɛsɛ sɛ wodi dwuma sɛ Onyankopɔn adwumayɛfo wɔ ‘Yehowa Akodi’ mu. (Numeri 21:14) Mpɛn pii no, na ɛsɛ sɛ Israelfo no di kan kyerɛ nkurɔfo no nea ɛsɛ sɛ wɔyɛ na wɔnam so de wɔn ho ahyɛ Israelfo no ase. Sɛ kurow bi mufo ampene so a, ɛnde na Israel betumi aka wɔn ahyem—nanso na ɛsɛ sɛ wɔyɛ no sɛnea Onyankopɔn mmara kyerɛ. Esiane sɛ na Israelfo asraafo kuw mu mmarima nte sɛ asraafo a wɔadi ako wɔ abakɔsɛm nyinaa mu no nti, na wɔmma wɔn kuw no kwan sɛ wɔnto mmea mmonnaa anaasɛ wonkunkum nkurɔfo sɛnea ɛnsɛ. Na ɛnsɛ sɛ wɔsɛe nneɛma a ɛwɔ atrae hɔ mpo, na na ɛnsɛ sɛ wotwitwa wɔn atamfo no nnua a ɛsow aba gu. * Ná asraafo foforo nni anohyeto ahorow biara a ɛte saa.—Deuteronomium 20:10-15, 19, 20; 21:10-13.
18 Sɛ wote sɛ wɔtete mmofra sɛ asraafo wɔ aman bi mu a, so ɛyɛ wo ahodwiriw? Tete Israel no, wɔamfa ɔbarima biara a onnya nnii mfirihyia 20 ankɔ sraadi. (Numeri 1:2, 3) Sɛ ɔbarima a wanyin mpo yɛ ahufo a, na woyi no fi mu. Ná woyi ɔbarima a waware foforo fi mu afe biako sɛnea ɛbɛyɛ a ansa na ɔde ne ho bɛhyɛ adwuma a ɛyɛ hu saa mu no na ebia wɔawo nea obedi n’ade. Mmara no kyerɛkyerɛɛ mu sɛ, wɔyɛɛ no saa sɛnea ɛbɛyɛ a okunu aberante no betumi ama ne yere foforo no ‘ani agye.’—Deuteronomium 20:5, 6, 8; 24:5.
19. Nsiesiei bɛn na na ɛwɔ Mmara no mu a na ɛbɔ mmea, mmofra, mmusua, akunafo, ne nyisaa ho ban?
19 Mmara no bɔɔ mmea, mmofra, ne mmusua ho ban nso, na edii wɔn ahiade ho dwuma. Ɛhyɛɛ awofo sɛ wonsusuw wɔn mma ho bere nyinaa, na wɔmfa honhom fam nneɛma nkyerɛkyerɛ wɔn. (Deuteronomium 6:6, 7) Ɛbaraa mogyafra nyinaa, na wɔde owu twee wɔn a wɔyɛɛ saa no aso. (Leviticus, ti 18) Ɛbaraa awaresɛe a ɛtaa paapae mmusua mu na ɛsɛe wɔn ahobammɔ ne wɔn anuonyam no nso. Mmara no dii akunafo ne nyisaa ahiade ho dwuma, na ɛkekaa nsɛm a emu yɛ den de baraa basabasa a na wɔbɛyɛ wɔn no.—Exodus 20:14; 22:22-24.
20, 21. (a) Dɛn nti na Mose Mmara no maa aware dodow ho kwan wɔ Israelfo mu? (b) Ɛdefa awaregyae ho no, dɛn nti na na Mmara no yɛ soronko wɔ gyinapɛn a Yesu san de sii hɔ akyiri yi no ho?
20 Nanso, wɔ eyi ho no, ebia ebinom bebisa sɛ, ‘Dɛn nti na Mmara no maa aware dodow ho kwan?’ (Deuteronomium 21:15-17) Ɛsɛ sɛ yegyina tebea horow a na ɛwɔ hɔ so na esusuw mmara a ɛtete saa no ho. Wɔn a wogyina nnɛyi nsɛm tebea ne amammerɛ so bu Mose Mmara no ho atɛn no rente ase. (Mmebusɛm 18:13) Yehowa gyinapɛn a ɔde sii hɔ wɔ Eden no maa aware yɛɛ abusuabɔ a ɛsɛ sɛ ɛtra hɔ daa wɔ okunu ne ɔyere ntam. (Genesis 2:18, 20-24) Nanso, eduu bere a Yehowa de Mmara no maa Israel no, na nneyɛe te sɛ aware dodow agye ntini mfirihyia ɔhaha pii. Ná Yehowa nim yiye sɛ ne ‘man a wɔn kɔn asen’ no bebu ahyɛde atitiriw te sɛ nea ɛbara abosonsom no mpo so mpɛn pii. (Exodus 32:10) Ɛnde, na nyansa wom sɛ wansan anyɛ wɔn aware ho nsɛm nyinaa ho nhyehyɛe foforo saa bere no. Nanso, kae sɛ, ɛnyɛ Yehowa na ɔhyehyɛɛ aware dodow. Nanso, ɔnam Mose Mmara no so siesiee aware dodow ho nsɛm wɔ ne nkurɔfo mu, na wɔde siw nneyɛe bɔne a na ɛkɔ so wɔ mu no ano.
21 Saa ara na Mose Mmara no maa ɔbarima kwan ma otumi gyaee ne yere aware wɔ nneɛma pii a na anibere wom ho. (Deuteronomium 24:1-4) Yesu kaa hokwan yi a Onyankopɔn de maa Yudafo no ho asɛm sɛ ‘wɔn komaden nti.’ Nanso, na hokwan a ɛte saa no yɛ bere tiaa mu de. Yesu san de aware ho mfitiase gyinapɛn no sii hɔ maa n’akyidifo.—Mateo 19:8.
Mmara no Hyɛɛ Ɔdɔ Ho Nkuran
22. Akwan bɛn so na Mose Mmara no hyɛɛ ɔdɔ ho nkuran, na wɔdaa no adi kyerɛɛ henanom?
22 Wubetumi ahu nnɛyi mmara kwan so nhyehyɛe bi a ɛhyɛ ɔdɔ ho nkuran? Mose Mmara no hyɛɛ ɔdɔ ho nkuran sen biribi foforo biara. Wɔ Deuteronomium nhoma no mu nkutoo no, asɛmfua a egyina hɔ ma “ɔdɔ” no pue bɛboro mpɛn 20. Ná “dɔ wo yɔnko sɛ wo ho” ne Mmara no nyinaa mu kɛse a ɛto so abien. (Leviticus 19:18; Mateo 22:37-40) Ná ɛnsɛ sɛ Onyankopɔn nkurɔfo no da ɔdɔ a ɛte saa adi kyerɛ wɔn ho wɔn ho nko, na mmom ahɔho a wɔabɛtra wɔn mu nso, na wɔkaee Israelfo no sɛ na wɔn nso ayɛ ahɔho bere bi. Ná ɛsɛ sɛ wɔda ɔdɔ adi kyerɛ ahiafo ne amanehunufo, na wɔboa wɔn honam fam, na na ɛnsɛ sɛ wosisi wɔn esiane sɛ wɔn asɛm yɛ mmɔbɔ nti. Wɔka kyerɛɛ wɔn mpo sɛ wɔne mmoa a wɔsoa nneɛma nni no ayamye ne tema mu.—Exodus 23:6; Leviticus 19:14, 33, 34; Deuteronomium 22:4, 10; 24:17, 18.
23. Dɛn na wɔkanyan Dwom 119 no kyerɛwfo ma ɔyɛe, na dɛn na yebetumi asi yɛn bo ayɛ?
23 Ɔman foforo bɛn na wɔama wɔn mmara a ɛte saa? Ɛnyɛ nwonwa sɛ odwontofo no kyerɛwee sɛ: “Medɔ wo mmara dɛn ara!” Nanso, na ne dɔ no mfi nkate mu ara kwa. Ɛkaa no ma ɔyɛɛ ade, efisɛ ɔbɔɔ mmɔden dii saa mmara no so na ɔde bɔɔ ne bra. Afei, ɔtoaa so sɛ: “Ɛne m’adwene daa adesae.” (Dwom 119:11, 97) Yiw, ogyee bere suaa Yehowa mmara no daa. Akyinnye biara nni ho sɛ bere a ɔyɛɛ saa no, ɔdɔ a ɔwɔ ma mmara no yɛɛ kɛse. Bere koro no ara, ɔdɔ a ɔwɔ ma Mmarahyɛfo no, Yehowa Nyankopɔn, no nso yɛɛ kɛse. Bere a wokɔ so sua Onyankopɔn mmara no, ɛmmra sɛ wo nso wobɛbɛn Yehowa, Mmarahyɛfo Kɛse ne Onyankopɔn a obu atɛntrenee no bere nyinaa.
^ nky. 8 Sɛ nhwɛso no, mmara a ɛhwehwɛ sɛ wɔkata tiafi so, ayarefo a woyi wɔn kogu baabi, ne obiara a ɔka funu a na ɛsɛ sɛ oguare no yɛ mmara a mfirihyia ɔhaha pii twaam ansa na amanaman no hu.—Leviticus 13:4-8; Numeri 19:11-13, 17-19; Deuteronomium 23:13, 14.
^ nky. 9 Bere a adan a na mmarima ne mmea nya nna mu kyɛfa wom wɔ Kanaanfo asɔrefie no, Mose Mmara no kae sɛ wɔn a na wɔn ho agu fĩ ntumi nhyɛn asɔrefie no mu mpo. Esiane sɛ nna mu nkitahodi maa nkurɔfo ho guu fĩ bere bi nti, na obiara ntumi mfa ɔbarima ne ɔbea nna mmɛka Yehowa som ho wɔ ne fie mma ɛnyɛ nea ɛfata wɔ mmara kwan so.
^ nky. 10 Ná Mmara no atirimpɔw titiriw ne sɛ wɔde bɛkyerɛkyerɛ. Nokwarem no, Encyclopaedia Judaica ka sɛ Hebri asɛmfua a egyina hɔ ma “mmara,” toh·rahʹ, no kyerɛ “nkyerɛkyerɛ.”
^ nky. 17 Mmara no bisae pefee sɛ: “So afuw mu dua yɛ onipa na woatua no?” (Deuteronomium 20:19) Philo, Yudani nhomanimfo bi a ɔtraa ase wɔ afeha a edi kan no mu no twee adwene sii mmara yi so, kyerɛkyerɛɛ mu sɛ Onyankopɔn susuw sɛ “ɛmfata sɛ wɔdan nnipa ho abufuw kɔ nneɛma a ɛnyɛɛ bɔne biara so.”
Leviticus 19:9, 10; Deuteronomium 24:19 Wote nka dɛn wɔ Onyankopɔn a ɔyɛɛ mmara a ɛtete saa no ho?
Dwom 19:7-14 Dawid tee nka dɛn wɔ ‘Yehowa mmara’ ho, na ɔkwan bɛn so na ɛsɛ sɛ Onyankopɔn mmara som bo ma yɛn?
Mika 6:6-8 Ɔkwan bɛn so na asɛm yi boa yɛn ma yehu sɛ yentumi mmu Yehowa mmara sɛ adesoa mma ɛnyɛ yiye?
Mateo 23:23-39 Ɔkwan bɛn so na Farisifo no daa no adi sɛ na wɔnte Mmara no ase, na ɔkwan bɛn so na eyi yɛ kɔkɔbɔ nhwɛso ma yɛn?